Bots Attack. Ahoana ny fomba hanesorana azy ireo avy amin'ny tranonkalanao - Semalt Practice
Raha mijaly amin'ny viriosy maloto ianao na miampanga, dia tokony ho bot ianao, ary tokony hesorina tsy ho ela araka izay azo atao. Ny bots dia rindrambaiko maloto izay afaka mamindra mora foana ny solosaina, ny toeram-piasana, ary ny fitaovana finday. Nampiasain'ireo hackers izy ireo hanaparitaka spam, hanaparitaka ny fanafihana amin'ny serivisy ary hitarika ny heloka bevava isan-karazany amin'ny aterineto. Amin'izao fotoana izao, marina ny milaza fa ny botsika dia tsy mandray karama noho ny viriosy, ny rootkits, ary ny malware. Ny fiovana anefa dia miova ary ny mpikaroka dia mitatitra fa mampidi-doza toy ny virosy sy ny malware amin'ny ordinatera ny bots. Afaka manimba ny tranokalanao izy ireo ary mahazo fidirana amin'ny rafitrao, manimba ny lazanao eo amin'ny tranonkala. Ho an'ity raharaha ity, i Julia Vashneva, Semalt Mpitarika Success Success Manager, dia hampiseho aminao ny tokony hatao raha misy botsaoka manohitra ny tranonkalanao.
Mitandrema amin'ireo virosy sy bota
Zava-dehibe ny mitandrina ny viriosy sy ny bots. Ny sasany amin'izy ireo dia afaka manafika ireo sehatra Windows toy ny Robots, Sabots, Agobots, Wootbots ary Mobots. Botsa vitsivitsy dia mety hisy fiantraikany amin'ny rindrambaiko Trojan ary hapetraka ao amin'ny ordinateran'ny ordinateranao automatique. Mamorona olana maro izy ireo, manome fomba ho an'ireo mpamono olona haka ny angon-drakitrao ary hangalatra ny mombamomba anao manokana. Raha manana botsa be dia be ao amin'ny fitaovana ianao, dia mety haka ny fanaraha-maso ny rafitrao ireo mpanafika, ary mety tsy ho vitanao ny hampitsahatra azy ireo amin'ny ankapobeny..
Toy ireo karazana viriosy sy malware isan-karazany, tsy mora ny mamantatra ny botsika ary mety hiteraka olana maro ho an'ny fitaovana. Raha tianao ny manaisotra azy ireo amin'ny solosaina, dia azonao atao ireto manaraka ireto:
Mampiasa ny Windows Task Manager
Tokony handinika ny mpitantana ny tetikasa Windows ianao raha mitady karazana fampiharana manokana. Raha tsy manana loharanom-pahalalana ampy hitadiavana ireo fampiharana ireo ianao, dia nangatahinao mba tsy haka azy ireo avy amin'ny loharanom-baovao fantatra fa mety hikapoka ny ordinateranao amin'ny fomba toy izany ny hackers.
Famakiana ny rafitrao
Ny faharoa sy ny iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra dia ny famakiana ny rafitry ny ordinateranao. Tsy maintsy manao izany ianao mba hahazoana antoka fa tsy misy viriosy, malware, ary botsika ny fitaovanao. Tsy ilaina ny fanatanterahana ny fitaovana antonontonona maro. Fa tokony hampiasa rindrambaiko matanjaka iray fotsiny ianao ary esory miaraka amin'ny fitaovana mety ny code
Fanandramana ho an'ny seranana misokatra
Tokony hadihadio amin'ny fahabangan'ny orinasa sy ny seranan-tsambo ianao mba hialana amin'ny serivisy. Ny sasany amin'ireo fitaovana mahery vaika dia ny Nessus sy ny QualysGuard, izay manampy anao hamaha ny seranana misokatra sy mihidy. Azonao atao koa ny mijery ny rafitrao amin'ny karazam-bolana rehetra ary manatsara ny fanandramana amin'ny filaminana tsy tapaka.
Ny dingana farany sy farany dia ny fitsapana ny otrik'aretina. Azo atao izany amin'ny fijerena ny kalitaon'ny fifamoivoizana mifandray amin'ny fitaovana. Tokony hametraka ny rindrankajy manan-danja ianao, ary miezaha hahazo ny fahafaha-miditra amin'ny tontolon'ny Google Analytics hanamarinana raha toa ka efa naharay fitsapana tsara ianao na tsia.
Ireto misy fomba fitrandrahana mahavariana sy mahavariana azonao atao mba hialana amin'ny botsaka sy ny otrik'aretina virtoaly Source .